Madaafiic Caawa Laga Maqlayo Deegaano Ka Tirsan Gobolka Sh/Hoose
November 30, 2018 F.G 0
Wararka Laga heleyno deegaano ka tirsan Gobolka Shabeellaha Hoose waxa ay sheegayaan in Caawa halkaasi lagu garaacayo madaafiic xoogan. Madaafiicda ayaa waxaa la sheegay in sigaar ah loogu garaacayo Saldhigyo Al-shabaab ay ku leeyihiin deegaano hoostaga deegaanka Jilibka Marka,halkaasi oo ay maanta dagaal xoogan oo ku dhexmaray Ciidamada Xoogga dalka Soomaaliya iyo dagaalyhano ka tirsan Al-shabaab. Dad deegaanka waxa sheegeen in ay maqlayan jug culus oo madaafiic ah,isla markaana sidoo kale ay cabsi dareemayan. Sidoo kale Madaafiicda ayaa waxaa la sheegay in ay riyadan Ciidamada AMISOM,kuwaasi oo la tilmaamay in dagaal ka dhacay deegaano ka tirsan Gobolka Shabeellaha Hoose looga qabsaday gaadiid ay leeyihiin. Ilaa iyo hadda lama oga khasaaraha ka dhashay Madaafiicda caawa lagu garaacayo deegaano ka tirsan Gobolka Shabeellaha Hoose.
Xildhibaan Shiiq Aadan Madobe Oo Ka Soo Horjeestay Ciidanka La Geeyay Baydhabo
Qaar ka Mid ah Xildhibaanada Barlamanka Somaliya ee Ka soo Jeeda Konfur Galbeed ayaa Dowlada dhexe ee fedaraalka ku eedeyay in ay faragalin ba,an ku heyso doorashada maamulka koonfur galbeed ee la filayo in 5-ta bisha soo aadan ay ka dhacdo magaalada Baydhabo. Xildhibaan shiiq aadan madoobe oo barlamaanka dhexe u matalada dowlada fedaraalka soomaaliya maamulka koonfu galbeed ayaa dhaliilay talaabada askar ka tirsan dowlada loogu daabulay magaalada Beydhabo.Waxaa uu sheegay in arintaan maamulada kale ee ka jira dalka aysan la qabin maamulka koonfur galbeed. Hadalkaan ayaa waxaa uu imaanayaa iyadoo maanta diyaarad waday 100 askari oo ka tirsan ciidanka dowlada fedaraalka ee ku sugan magaalada muqdisho ay ka dageen garoonka diyaaradaha ee magaalada Beydhabo. Dhanka kale wasaarada arimaha gudaha ayaa saraakiil u hadashay waxay beeniyeen eeda loo jeediyay ee ah in ciidankaan beydhabo loo geeyay in musharax gooni ah ay taageeraan.
Guddoomiye Mursal”Markaan Muqdisho Tago ayaa Ka Hadli Karaa kala dirista guddiga Maaliyada Baarlamaanka”
Guddoomiyaha Baarlamanka Soomaaliyeed Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa markii ugu horeysey ka hadley kala diristii guddiga maaliyada baarlamanka ee uu sameeyey guddoomiye ku xigeenka koowaad ee Baarlamaanka. Gudoomiye Mursal oo hadda ku sugan dalka Turkiga, ayaa sheegey inuu berri tegi doono magaalada Muqdisho, kadibna uu u eegi doono go’aanka kala dirista guddiga maaliyada, si loo xaqiijiyo inuu waafaqsan yahay xeer hoosaadka barlamanka. Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan oo wareysi siiyay laanta afka soomaaliga ee VOA ayaa si toos ah u sheegin inuu sharci yahay kala dirista iyo inkale isagoo ku adkeystey inuu marka uu dib ugu laabto dalka Soomaaliya uu arrintaas go’aan ka gaari doono. “Guddoomiye ku xigeenka koowaad ayaa go’aankan gaaray markaan tagno oo baaritaan aan sameeyo ayaan arki doonaa in go’aanku uu waafaqsan yahay xeer hoosaadka baarlamaanka.”ayuu yiri guddoomiyaha Baarlamaanka. Mar la weydiiyay in uusan awood u lahayn inuu ka horyimaado go’aano ay xukuumada ku cadaadiso baarlamaanka ayuu ku jawaabay guddoomiyaha Baarlamaanka. “Arrimahaas waa arrimo mala awaal ah baarlamaanka waa ka madax banaan yahay xukuumada mana jirto caqli sheegaya in baarlamaanku uu hoostagayo xukuumada [Sii aqri]
Muxuu Yahay Amarka uu Ku Soo Rogay R/Wasaare Kheyre Gollaha Wasiiradda Xukuumadda Soomaaliya
November 29, 2018 F.G 0
R/wasaaraha xukuumadda Federaalka Soomaaliya, mudane Xasan Cali Khayre, oo guddoomiyay kulankii maanta ee golaha wasiirrada ayaa faray dhammaan wasiirrada xukuumadda in ka hor dhammaadka bisha December ay dhamaystiraan hawlaha uga harsan qorsha hawleedka Sanadka 2018-ka. R/wasaare Xasan Cali Khayre ayaa sheegay in dhammaystirka qorsha howleedka sannadkaan ay fududaynayso in si fudud loogu gudbo qorshayaasha qaran ee sanadka 2019 Kulanka golaha wasiirrada ee maanta ayaa sidoo kale lagu soo bandhigay dhammaan warbixinno iyo hal-beegyada tubaha ee qorshuhu ahaa in fulintooda lagu guulaysto sannadkaan dhammaadka ah.
La Taliyaha Guddoomiye Mursal “kala dirida Guddiga Maaliyadda ma waafaqsana xeer hoosaadka”
La Taliyaha Guddoomiyaha Golaha Shacabka C/qaadir Maxamed Nuur (Jaamac) ayaa su’aal ka keenay sharcinimada kala dirida Guddiga Maaliyadda, isagoo caddeeyay in aanay waafaqsaneyn Xeer hoosaadka. Qoraal uu soo dhigay bartiisa Facebook ayuu ku muujiyay in kala diridii Guddoomiye kuxigeenka 1aad ee Golaha Shacabka C/weli Muudey ku sameeyay Guddiga Maaliyadda uusan ku raacsaneyn Guddoomiye Maxamed Mursal oo dalka Turkiga ku maqan. “Guddoomiyaha golaha shacabka Barlamaanka Fedaraalka wuxuu waajib ka saaranyahay ilaalinta xeerhoosaadka Golaha Shacabka ee Baarlamaanka federaalka, dooda ka dhalatey kala diridda Guddiga Maaliyadda ma waafaqsana Xeer Hoosaadka golaha, maadaama golaha xilka u dhiibtey isla golaha ayaa awood u leh kala diristiisa”ayuu yiri La Taliyaha Guddoomiyaha Golaha Shacabka C/qaadir Maxamed Nuur. Qoraalka La Taliyaha ayaa waxaa uu jawaab yahay qoraal goor sii horeysay barteeda Facebook ku qortay Wasiirka Dhalinyarada iyo isboortiga Khadiijo Maxamed Diiriye ay ku sheegtay in imaanshaha Guddoomiye Mursal aanay waxba ka bedeli doonin qoraalkii uu ku saxiixnaa Guddoomiye kuxigeenka 1aad C/weli Muudey uu ku kala diray Guddiga Maaliyadda. Guddoomiyaha Baarlamaanka Maxamed Mursal ayaa ka soo horjeeda kala dirida Guddiga Maaliyadda, isagoo laga soo [Sii aqri]
Maxaa Ka Soo Baxay Shirka Golaha Wasiiradda Jubbaland?
November 29, 2018 M.Jo 0
Madaxweynaha Jubbaland Mudane Axmed Maxamed Islaam ayaa maanta shir gudoomiyay kulanka golaha ee caadiga ahaa. Ugu horayn gudiga maaraynta arimaha dhulka oo uu madax ka yahay Madaxweyne ku xigeenka koowad ayaa ka warbixiyay halka ay howshoodu marayso iyagoo sheegay in muwaadiniin badan ay isku diiwaan galinayaan sharciyaynta dhulka isagoo sharaxay caqabadaha ilaa hada ka horyimid iyi sida ay u mareeyeen inkastoo si wanaagsan ay wax ku socdaan. Sidoo kale gudiga dib u habaynta dhaqaalaha oo uu madax u yahay Madaxweyne ku xigeenka labaad ayaa sheegay in howlaha kobcinta dhaqaalaha iyo uruurintoodu ay dardar ku socoto isla markana hay’ado badan oo lacago Canshuuro ah ay ku baaqan jireen hada laga qaado dhamaana salka loo dhigay hanaanka ilaha dakhliga ee Degmada Kismaayo ee Caasimada KMG kadibna guud ahaan dalka laga fulinayo. Wasaarada macdanta iyo biyaha ayaa soo bandhigtay hanaanka helida biyaha wanaagsan kaas oo dib u habayn lagu samaynayo qaabkii magaalooyinku ay biyaha ku heli jireen isla markana xooga lasaarayo goobaha ay faganyihiin dadka kasoo laabtay xeryaha qoxootiga iyo kuwa gudaha wadanka ku barakacay. Wasaaradaha Ganacsiga iyo [Sii aqri]
Warbixintii Ugu Dambeeyay Shabaab Oo Ka Baxay Degmada Xara dheere
Wararka naga soo gaaraya degmada Xarardheere ee Gobolka Mudug ayaa sheegayaan in Al-shabaab ay isaga baxeen degmadaasi, kadib markii ay kordheen diyaaradaha dagaalka ee duqeymaha ka fulinaya degaanada hoos yimaada degmadaasi. Dadka degaanka ayaa sheegay in Al-Shabaab ay halkaasi isaga baxeen,waxaana cidlo ah Saldhiga iyo xarunta Degmada, maadaama halkaasi ay ku lahaayeen Fariisimo. Ka bixitaan Al-Shabaab ee Degmada xarar-dheere ayaa waxaa loo sababeeyey in ay dulqaadan waayeen duqemaha ay diyaaradaha Mareykanka ka fuliyaan degaanada ka tirsan gobolkaa Mudug. Mudo ku dhow 10 Sano ayay maamulayeen Al-Shabaab degmada Xarar-dheere ee Gobolka mudug. Ciidanka maamulka Galmudug ayaa maalmhii la soo dhaafay howlgallo ka waday degaano ku yaalla gobolka Mudug. Sidoo kale Bishaan gudaheeda ayaa in ka badan 4 jeer oo xiriir ah diyaaradaha dagaalka Mareykanka ay duqeeyeen degaano hoos yimaada degmada Xarardheere.
Wasiir Khadiijo”Waxba Ma Soo Kordhin Doonto Haduu Yimaado Guddomiye Mursal”
Wasiirka Dhalinyarada iyo Ciyaaraha Xukuumadda Soomaaliya Khadiijo Maxamed Diiriye ayaa sheegtay in imaanshaha Guddoomiyaha Golaha Shacabka Maxamed Mursal oo dibadda ugu maqan howlo u gaar ah aanay waxba ka bedeli doonin kala diridii Guddoomiye kuxigeenka 1aad ee Baarlamaanka C/weli Muudeey ku sameeyay Guddiga Maaliyadda iyo Miisaniyadda. Qoraal kooban oo ay soo dhigtay barteeda Facebook ayay ku tiri” “Imaanshaha Guddoomiye Mursal waxba kama bedeli karto qoraalka uu ku saxiixan yahay Guddoomiye kuxigeenka 1aad ee Golaha Shacabka C/weli Ibraahim Muudey” Hadalka Wasiir Khadiijo ayaa u muuqda mid jawaab u ah hadalo ka soo yeeray qaar ka mid ah Xildhibaanada Golaha Shacabka, kaasoo sheegaya in Guddoomiye Mursal uu ka soo horjeedo kala dirida Guddiga Maaliyadda. Inkastoo la sheegay inay sharci darro tahay kala dirida uu Guddoomiye C/weli Muudey ku sameeyay Guddiga Maaliyadda, hadana waxaa la ogeyn go’aanka uu qaadan doono Guddoomiye Mursal oo qudhiisa lagu xagliyo inuu u janjeero dhanka Xukuumadda oo la rumeysan yahay inay gadaal ka riixeysay. qorshaha lagu kala diray Guddiga Maaliyadda. Xukuumadda uu hoggaamiyo Ra’iisul Wasaare Kheyre ayaa 74% ay yihiin Xildhibaano ka tirsan [Sii aqri]
Muxuu Xeer Hoosaadka Golaha Shacabka Ee BF Ka Dhahay Kala Dirista Guddiyada?
Xeer Hoosaadka golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ah waxaa ku xusan in golaha shacabka uu aqal ahaan dhisayo guddiyada(ayna ku jirin madaxda guddiyada), isla markaana waxaa uu qeexaa waajibaadka shaqo ee guddiyadaas, kadib marka uu gudoomiyaha Golaha Shacabku soojeediyo asagoo la tashanaya ku xigeenadiisa. Qodobkaas sida ku xusan, guddoonka golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya waxaa uu leeyahay soo-jeedin, laakin dhisidda iyo baab’inta intaba waxaa leh aqalka golaha shacabka. Mar haddii isla qodobkaas lagu sheegay in golaha ay guddiga uun dhisayaan, isla markaana aaney shaqo ku laheyn madaxda guddiyada, qodob 58aad ee isla Xeer Hoosaadka waxaa uu ka sheekeynayaa sida ay tahay in guddiyada ay guddoon u yeeshaan, qaabka doorashada iyo sida warbixinnada u gudbiyaan. Qodobka 57aad waxaa uu xusayaa shaqada guddiyada oo ay ku jiraan: In ay talo siiyaan guddiga misaaniyada iyo Maaliyadda, lacagta iyo illaalinta hantida qaranka arimaha ku saabsan mudnaanta miisaniyadeed ee wasaaradaha ama hay’adaha kale ee shaqadooda hoos timaado, In ay baaraan talana ka bixiyaan siyaasadaha saameynta ku leh wasaaradaha guddiyada shaqadu kala dhaxeyso. In ay keenaan doodo barlamaanku ka yeesho oo [Sii aqri]
Ciidanka NISA Oo Sheegay In ay Gacanta Ku Dhigeen Ruuxii Ka Danbeeyay Qaraxii Hotel Saxafi
Hey’adda Nabadsugida iyo Sirdoonka Qaranka ayaa sheegay in howlgal xirfadeysan oo si taxadar leh loo fuliyay lagu soo qabtay mid ka mid ah maskaxdii maleegtay weerarkii lagu qaaday Hotelka Saxafi 9-kii bishan November. Qoraal lagu soo dhigay barta Twitter-ka ee NISA ayaa lagu sheegay in ciidanka Amniga ay ku guuleysteen soo qabashada mid ka mid ah raggii maleegay weerarkaas, lana horkeeni doono sharciga. Weerarkii Hotelka Saxafi oo dhacay 9-kii bishan November ayaa waxaa ku dhintay ku dhowaad 50-meeyo ruux, halka boqol kalena ay ku dhaawacmeen, weerarkaas waxaa u ahaa kii u horeeyay ee noociisa qaraxyo xiriir ah ku bilowda. Inkastoo qoraalka la soo dhigay barta Twitter-ka ee NISA uu ahaa mid kooban, lama sheegin magaca qofka la soo qabtay. Hey’adda Nabadsugida iyo Sirdoonka ayaa muddooyinkii u dambeeyay barta Twitter-ka ku shaaciya xogo la xiriira howlgalo lagu soo qabtay shaqsiyaad ka tirsan Al-Shabaab iyo Daacish. Ma jirto tafaasiil intaas dheer aad oo laga bixiyo howlgalada ciidanka Amniga sameeyeen, marka laga reebo un in howlgal dhacay iyo xubin ka tirsan dhaq dhaqaaqyadaas dowladda ka soo horjeeda la [Sii aqri]